Xiritaanka Soo-saareyaasha Magnet & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Magnet
Nidaamka Faahfaahinta Xiridda Magnetic-ka waa isku-dhaf shaqeynaya oo ka kooban magnets magnet iyo caaryada birta ah. Caadi ahaan waxaa loo isticmaali karaa maaraynta aaladaha ama shaqeynta gacanta.
2100KG, 2500KG jiidaya Force Precast Golaha Magnet la taaban karo for Steel qaab ama Plywood caaryada Fixitaanka
2100KG, 2500KG Precast Concrete Magnet waa nooc awood awoodeed oo caadi ah oo loogu talagalay furitaanka magnets, kaas oo si aad ah loogu talinayo in loo isticmaalo hagaajinta sidemould ee sanduuqa sandwich-ka la shubay.
1800KG Magnet Magnet leh badhanka Daar / Deyn ee Nidaamka Qaab dhismeedka Prefabricated
1800KG Shuttering Magnet waa magnet sanduuq caadi ah oo lagu hagaajiyo caaryada precast ee wax soo saarka la taaban karo. Maadada neodymium magnetka dhirtu ku yar tahay oo xoog leh awgeed, waxay si adag u qaban kartaa caaryada miiska saaran. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qaab-sameynta birta ama caaryada plywood.
1350KG ama nooca 1500KG ee qaabdhismeedka magnetka leh qolofka birta kaarboon sidoo kale waa nooca awoodda awoodda caadiga ah loogu talagalay hagaajinta saxanka plateform, kaas oo si aad ah loogu talinayo in loo isticmaalo hagaajinta sidemould ee sanduuqyada sanduuqa precast la taaban karo. Waxay sifiican ugufiicnaan kartaa qaab-dhismeedka birta ama alwaaxa looxa.
450Kg sanduuqa magnet-ka waa cabbir yar oo habka magnetka ah si loogu hagaajiyo sidemold miiska shubka hore. Waxaa loo soo saari jiray guddi shub shuban ah sida 30mm ilaa 50mm.